AmaProteas abukise nge-India eyibhaxabulela ekhaya - Impempe
AmaProteas abukise nge-India eyibhaxabulela ekhaya
UNonkululelo Mlaba wamaProteas udlale kahle bebhekene ne-India ngeSonto
INingizimu Afrika ishaye into ecokeme ibhabhadisa i-India ngamawikhethi ayisishiyagalombili emdlalweni wosuku olulodwa wokuqala e-Ekana International Cricket Stadium, eLucknow, e-India, ngeSonto.
Amantombazane akuleli kubukeke ezilungiselele kahle kulo mdlalo njengoba engemaningi amaphutha awenzile kwi-innings yokuqala kanjalo nakweyesibili. AmaProteas ashwibe kahle ngesikhathi kubhetha i-India, aphinde ashaya into ecokene sekubhetha wona.
AmaProteas iwona awine ithosi akhetha ukushwiba kuqala. Ekuqaleni kubukeke sengathi enze iphutha njengoba i-India ibilishaya ngempela ibhola kuma-over okuqala. Ngesikhathi kuwu-154/4 bekungathi i-India izobeka ama-run abukekayo ebhodini.
Nokho abashwibi beNingizimu Afrika bakushintshile konke lokho bethatha amawikhethi kulandelana. Bekubhoke kakhulu uShabnim Ismail, ogcine enamawikhethi amathathu engenelwe ama-run angu-28, noNonkuleko Mlaba othole amawikhethi amabili engenelwe ama-run angu-41.
Umdlali ozamile ukwenza kahle kwi-India uDorai Mithali owenze ama-run angu-50. Nokho lokhu akusizanga kakhulu ngoba i-India igcine ikwaze ukwenza 177/9 okuvele kwacaca ukuthi ngeke kwanele nakancane ukuhlupha abadlali ababhethayo bamaProteas.
Ephendula amaProteas aqale kahle kakhulu ebhetha ngokukhulu ukukhululeka. Abadlali ababhetha ekuqaleni kumaProteas, uLaura Wolvaardt noLizelle Lee, bebelishaya ngokukhulu ukukhululeka. UWolvaardt ugcine enze ama-run angu-80 waphuma, kanti uLee wenze ama-run angu-83 yena engazange aphume. INingizimu Afrika iwine ngamawikhethi ayisishiyagalombili kusasele ama-over ayishiyagalolunye wonke. UJhulan Goswami uyena othathe amawikhethi amabili e-India
Ukudlala kahle kanje kwabadlali ababhetha phambili kumaProteas kubakhiphe inkani abadlali abashwibayo be-India. Lona bekungumdlalo wokuqala wosuku olulodwa kwemihlanu ezodlalwa yila mazwe. Umdlalo olandelayo ungoLwesibili ngo-8 ekuseni. Ngemuva kwemidlalo yosuku olulodwa kuzodlalwa imidlalo yeT20 okulindeleke ukuthi idle ngokushuba khona e-India.
Previous Previous post: OweBucs uhalalisele uMotshwari ngokubizwa kwiBafana
Next Next post: UHunt uthi ukubumbana kuphela okuzobadlulisa kulesi simo esingesihle esibhekene neChiefs